Ady Amin’ny ” Jadona Mahery Vaika” Any Amin’ny Faritra Fitrandrahana Arintany Any Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2013 13:28 GMT
Nitsidina ny tany Severnyi, tanàna ravan'ny fitrandrahana arintany ao atsinanan'i Okraina, ilay bilaogera ao amin'ny Donetsk Stanislav Kmet (mpampiasa ny LJ frankensstein), taorian'ny nandefasan'ireo mponina ao an-toerana mailaka taminy izay mangataka ny hanampiany azy ireo mba hisintona ny sain'ny olona ho any amin'io fitrandrahana tsy ara-dalàna io izay mitady handrava ny tranon-dry zareo. Nandefa tatitra an-tsary ny diany tao amin'ny bilaoginy i Kemt (ru; andiany voalohany sy andiany faharoa – sary manodidina ny 70 sy lahatsary 2), ho fanampin'ireo tahiry izay efa betsaka raha ny ara-tantara sy ny olana misy any Donbas ankehitriny, faritra izay mamokatra ny ampahany betsaka amin'ny arintany any Okraina.
Araka ny hevitr'i Kmet, raha tsy ho noho ny vola Okrainiana sy ny fahazahoan-dàlana mivezivezy (pasipaoro) mbola miasa any Severnyi, sarotra ny milaza fa hoe ampahantany ao amin'ny fanjakan'i Okraina no misy ity tanàna ity – “mitoka-monina”- iray amin'ireo maro be any Donbas- izay ” na ny Lalàm-panorenana, na ny làlana hafa dia tsy manan-kery.”
Inty ny famintinan'i Kmet ny zava-misy any :
[…] Tahaka izay miseho matetika amin'ny tanàna fitrandrahana arintany, […] manomboka miara-maty amin'ny fitrandrahana arintany eo an-toerana i Severnyi. Nambara fa tsy ahazoana tombony ny fitrandrahana any Severnaya hatramin'ny 2000, ary afaka fotoana fohy dia hijanona eo io fitrandrahana arintany io. Any amin'ireo [ lavaka fitrandrahana atao hoe : kopankas] maro be fotsiny ihany, izay ny tompony no manana ny fahefana ao an-tanàna, no anaovana ny fitrandrahana amin'izao fotoana izao.Tsy manan-jo ny vahoaka any an-toerana, tsy mandray ny andraikiny ny olon'ny lalàna, mitohy tsy miteny sy milaza ny zavatra rehetra ho mandeha tsara ireo manampahefana any an-toerana. Tsy menatra akory ireo orinasa mpitrandraka fa mangorona sy mitrandraka ireo tany manan-karena arintany, mandavaka ny manakaiky ny ala, mandrava tranon'olona. Toerana maro tany Donbas no nalehako, fa tsy mbola nahita didy jadona mahery vaika tahaka izao aho na taiza na taiza.
Miorina eo anelanelan'ny tanànan'i Snezhnoye sy [Torez], tanàna kely tsy dia tsara honenana ny tanànan'i Severnyi – saiky tsy misy asa ao, ary henjana sy mandany fotoana raha ho any amin'ny tanàna akaiky amin'ny fandehanana aminà làlan-dratsymikintaontaona. Tsy dia misy vidiny akory foto-drafitrasa, ary nihena ny isan'ny mponina 17.000 ( tamin'ny fiandohan'ny 1990) lasa 10.000 ( tamin'ny 2012). […]
Trano tsy mety vita, rava sady tsy misy olona, làlana maloto tsy azo diavina: miara-miasa tsara mihitsy ny sary sy ny fanazavana nataon'i Kmet hilazàna ny ” tontolo tsy misy fanantenana” ho an'i Severnyi. Izao no nosoratany :
[…] Na dia ny trano misy mipetraka any Severnyi aza dia efa misy fitomboky ny faharavana sy ny fahafatesana. Raha mandeha eny an-dalambeny eny ianao dia mitsipozipozy, mitongilana, ary ratsy karakara ny zavatra rehetra manodidina. Tahaka ny hoe tsy olona no mipetraka amin'ilay trano fa faty mitsangana ‘momie’ mandehandeha, sady tonta no vovohana toy ny fonenandry zareo ihany. […]
Tahaka ny hoe efa nandao ity tanàna ity ireo olona mbola afaka manao zavatra.
Azoko antoka fa [ Andrei Tarkovsky, mpamokatra sarimihetsika, izay nitantana ny Stalker tamin'ny 1979,] no mety ho tia ity toerana ity. […]
Eny rehetra eny ireo fitrandrahana arintany tsy ara-dalàna, hoy Kmet :
[…] Tena atao an-karihary daholo ny zava-drehetra. Samy tsy misy mihetsika na ny manampahefana na ny olon'ny lalàna. Mbola mitohy ihany ny fandrobàna harena an-kibon'ny tany, toy ny hoe tany tsy misy fanjakana, ary afaka mitrandraka amin'izay toerana tiany ny tsirairay.
Mahita ‘lavaka’ maro voatrandraka sy efa nilaozana izahay. Rehefa lany ny harena ao amin'ny kopanka iray, dia mifindra ary mandavaka iray vaovao indray ry zareo. […]
Manakaiky ny trano fonenan'ny olona ny sasany amin'ireny fitrandrahana ireny- ary izany no olana nitondra an'i Kmet sy ny namany ho any Severnyi.
Ireo mponina amin'ireo làlana voakasik'izany dia naneho tamin'i Kmet ireo kopanka roa izay loza mananontanona ny tranony, tahaka izany ihany koe ny Làlan'i Kozlov, voatery nifindra trano ny olona noho ny fahasimban'ny tranony vokatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna :
[…] Fantany fa misy arintany ao ambanin'ny tokotaniny ao. Raha vao manomboka mitrandraka izany izy ireo dia ho rava ny tranony noho ny fifotetahan'ny tany. […]
Tsy misy vokany ireo andrana nataon'ny mponina ho fanoherana ny fitrandrahana tsy ara-dalàna : tsy raharahain'ny manampahefana ireo fitarainana napetraka ôfisialy, ary ny loza, dia hita taratra ny fiaraha-miasany amin'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ireo ( ohatra ny fanomezany herinaratra ho azy ireo )
Rehefa nifamaly mivantana tamin'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ny vehivavy iray tao an-tanàna, dia fandrahonana ho faty no azony ho setrin'izay. Tanisain'i Kmet ny tantarany (izay noraketiny anaty lahatsary ) :
[…] Tany am-boalohany dia naniry fotsiny ho tonga aminà fifanarahana iray izahay […]. Fa rehefa tonga ireo jiolahy, dia nanatona azy ireo aho ary niteny : ” ô ry zalahy, tsy manana alàlana handavaka eo ianareo.” Avy eo namaly ahy ny iray tamin'izy ireo : ” Sasatry ny miaina angaha ianao, madama ? Satria azonay atao ny [ mitoraka tavoahangy roa misy zava-mipoaka] rahalina-dia hilamina ny zava-drehetra !” Rehefa nandre izany aho, mazava loatra, dia nanapa-kevitra ny hanakombom-bava. […]
Soratan'i Kmet fa ny hany fanantenana ho an'ireo mponina ao an-toerana ireo dia ny mampiditra an-tsehatra ny haino aman-jery .
Ny lahatsary iray hafa tafiditra amin'ity tatitra an-tsary ity dia lehilahy iray miasa ao anatin'ny iray amin'ire kopanka tsy ara-dalàna. Ambaran'i Kmet fa ho ampahany amin'ny fanadihadiana momba an'i Severnyi izay iasany amin'izao fotoana izao ity lahatsary ity ary halefany amin'ny aterineto io lahatsary io atsy ho atsy :